Faa’idooyin Aadan Maleysan Karin Oo Ay Leedahay Xabad Sowdada | Xaqiiqonews
Faa’idooyin Aadan Maleysan Karin Oo Ay Leedahay Xabad Sowdada
inteena badan waxa aan maqalnay xadiithkii Rasuulka SCW ee ahaa “Xabad sowdada waxa ay daawo u tahay cudur walbo, marka laga reebo geerida”.
Xabad Sowdada oo sidoo kale loo yaqaan “Xabada barakada” waxaa la sheegaa in laga dhax helay qabrigii Fircoonkii Masar e geeriyooday Tutankhamun kaasi oo aasan 3,300 oo sano, taasi oo daliil cad u ah sida xabada barakeysan ay uga qeyb qaadatay xadaaradihii ban’aadamka.
Maqaalkani ka soo socdo waxa aad ku arki doontaa sida culimada iyo dhaqaatiirta dunida ee maanta ay u xaqiijiyeen waxtarka xabadani madow.
Xabad Sowdada Maxey ka tari kartaa Caafimaadkaada?
Ilaa maanta , waxa ay dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka sameeyeen ilaa 700 oo daraasad oo dhamaantood xoojinaya sida xabad sowdada muhiim ugu tahay caafimaadkeena.
Daraasadda koowaad waxaa ka qeyb qaatay lixdan qof, natiijudana waxa ay noqotay in saliida xabad sowdada ay wax badan ka tartay xasaasiyadda sanboorka, dadkii ka qeyb galay daraasadda ayaa isku raacay in ay dareemeen isbadal xoog leh ka dib 2 todobaad oo ay isticmaaleen Xabadda barakada.
Sidoo Kale Aqriso: Yaa-ku-fiican-cabitaanka-biyaha-kulal-mise-biyaha-qabow?
Hadii 2 Garaam oo xabad sowda ah loo isticmaalo si maalinle ah waxa ay hoos u dhigeysaa sokorta dhiiga, gaar aahan dadka qaba sokorta nooca labaad, sidaasi waxaa lagu sheegay natiijada daraasad lagu sameeyey 94 bukaan oo cudurka qaba.
Xabad sowdada oo aan isticmaalno muddo 9 todobaad ah, waxa ay ka qeyb qaadan kartaa in ay soo hagaajiso xasuusteena iyo heerka baraarugsanaanteena.
Arinta cajiibka ah waxa ay tahay in xabad sowdada ay daawo u noqon karta dadka ka cabanaya “Qabatinka daawooyinka(drug addiction), 35 qof oo ka cabanaayey qabatinka daawada ayaa xabad sowdada waxa ay ka caawisay in ay iska jaraan caadooyinka qabatinka.
Tusaalayaashan iyo kuwa kale ayaa fariin u diraya dadka aaminsan ee dhaha xabad soodada waa uun “daawo dhaqmeed”, waxaana la joogaa watigii dadka noocaasi dib ugu laaban lahaayeen fikirkooda.